Izinwele eziluhlaza, ukhetho lweenwele lokungabonakali | Amadoda aQinisekileyo
Ucinga ntoni ngeenwele eziluhlaza? Iziphumo zayo ezothusayo zenza ukuba ibe yenye yezona ndlela zinobungozi kwizinwele zakho, ke kufuneka ube nesibindi kwaye, ngaphezulu kwako konke, isitayile esingaqhelekanga nesala maxesha sokutshatisa iinwele zakho. Ukuba uhlala unxibe iisuti, cinga ngcono ngenye indlela.
Luhlaza ngumbala webala lebhola ekhatywayo, amagqabi emithi, kunye nezinto ezimbalwa ezingathandekiyo ezingafunekiyo ukukhankanywa. Kodwa inokuba ngumbala weenwele zakho ukuba ukhetha njalo. Ukuba isitayile sakho kufanelekile, iinwele eziluhlaza lolunye lwezinto onokukhetha kuzo kwizinwele zakho. Ewe ngokunjalo, njengoko le mizekelo ilandelayo ibonisa, kufuneka uzilungiselele ukuba ungabonakali.
1 Abantu abadumileyo abaneenwele eziluhlaza
1.1 Iingcamango zanamhlanje zokucheba iinwele zakho
2 Iinwele ezindala eziluhlaza zesikolo
Abantu abadumileyo abaneenwele eziluhlaza
Ukuba ucinga ukudaya iinwele zakho ziluhlaza, kuya kufuneka uyazi loo nto Awunguye owokuqala okanye owokugqibela ukuziva ukuba ufuna ukwenza utshintsho olukhulu kwiinwele zabo kunye nempikiswano. Ngamanye amaxesha kuyenziwa ukushiya inqanaba ngasemva, abanye ngesigqibo esilula sobuhle ... into ecacileyo kukuba kumaxesha akutshanje abantu abaninzi abadumileyo basebenzise tint eluhlaza, ukunceda ukuyenza ukuba ibe nefashoni phakathi kwabantu abancinci.
Kubo bonke amagcisa, iimvumi zezona ziphoswe kakhulu ekuzameni izinto ezintsha ngomfanekiso wazo. Ayimangalisi into yokuba ziimvumi ezichaseneyo kakhulu ziinwele eziluhlazaKananjalo neminye imibala ebetha ngokulinganayo, kuba uninzi lwempumelelo yomculo wentengiso-imboni apho kukho ukhuphiswano oluninzi- isekwe ekubeni phambili nasekusekeni imeko.
Iingcamango zanamhlanje zokucheba iinwele zakho
Jonga eli nqaku: Iinwele zanamhlanje. Apho uyakufumana ezinye iindlela zangoku zeenwele zakho.
UJared Leto ngomnye wabo bathunywa beenwele badumileyo. U-Leto uye wasebenzisa ukhetho olunobungozi, kodwa kule meko umthunzi ovuthayo oluhlaza owawunxibe imvumi kunye nomlingisi ngenxa yeemfuno zesikripthi 'seQela lokuzibulala', umboniso bhanyabhanya apho, njengoko uyazi, wadlala Joker. Nangona kunjalo, uLeto unokubonwa ekhululekile kakhulu ngenkangeleko yakhe entsha kubomi bakhe obuqhelekileyo, ngaphandle komlingiswa. Inwele ayithandayo kwezemidlalo sisikere esinqumle sokucheba ngasemva kweenwele. Ucinga ntoni ngesiphumo?
Iphakathi kakhulu - zombini kunye nebrashi kunye nomthunzi oluhlaza- imvumi uJoe Jonas ibonakalisile. Ngaphakathi kwindlela ekubetha ngayo ukusoloko unika iinwele umbala ongaqhelekanga, isiphumo esiphumelelayo sisengqiqweni. Ukongeza, ukudityaniswa kwezinto eziqaqambileyo eziluhlaza kunye ne-toupee kunceda ekudibaniseni ukuphakama okuphezulu, ke ukuba ufuna ukunika umbono wokuba unee-intshi ezimbalwa ubude, cinga ngokulandela umzekelo wabo. Ukuba ukhetha ukunqanda okuluhlaza, ungakhathazeki. Eli qhinga lisebenza ngokuqaqamba kweminye imibala.
Omnye umntu odumileyo ngokungathandabuzekiyo owaziwayo ngokuthatha umngcipheko ngomfanekiso wakhe nguJaden Smith. Unyana kaWill Smith uzame iindlela ezininzi ezinobuganga, kubandakanya umbala weenwele okwangoku. Xa kuziwa kwiinwele ezigobileyo, kufanelekile ukuba sikhankanye uFarrell Williams noFrank Ocean abanomdla, abanxibe iinwele zabo kulo mbala.
UZayn Malik ungomnye wabantu abadumileyo be-chameleonic. Utshintsho lwembonakalo yakhe alunakubalwa kwaye ewe, ngemini yakhe wazama neenwele eziluhlaza. Iinwele zemvumi zinokukunika inkuthazo ukuba ufuna ukongeza uluhlaza kunwele olufutshane kakhulu. UMalik uyidibanisa neendevu zeentsuku ezintathu. Njengakwangaphambili, UMalik onobuqhetseba obonisa ukuba iinwele eziluhlaza zisebenza kakuhle ngohlobo lwangoku.
Iinwele ezindala eziluhlaza zesikolo
Inxulunyaniswa nenkcubeko kunye nezizwe ezisezidolophini, iinwele eziluhlaza azikhethi kuphela kwinkulungwane yama-21. Olunye lwee-icon zolutsha ze-90's sele zibonile izibonelelo ezinikezelwa lolu khetho lweenwele xa kuziwa kwahlulahlula kwabanye kwaye ugxininise isimilo sabo semvukelo ngokudlula. Ngoku ukuba inkcubeko ye-pop's yee-90s injalo, kukufika ngexesha elifanelekileyo kunakuqala ukujonga isitayile sikaBillie Joe Armstrong. Inkokeli yoSuku oluGreen nayo yaya kwinqanaba lesinwele esimibalabala, mhlawumbi naso siluhlaza.
Nangona kubonakala kungenakwenzeka, kuma-90 kwakukho amagcisa awaba nesibindi ngakumbi kunoBillie Joe Armstrong. Umzekelo ngu Imvumi yoluvo Keith Flint. Isimbo sakhe esingaqhelekanga sasiphawulwa ngothambiso, ukugqobhoza kwaye, ngaphezu kwako konke, ngonwele lwantlandlolo, olwamkela imibala eyahlukeneyo, kubandakanya nohlaza.
Kwaye xa sithetha ngeenwele ezindala eziluhlaza zesikolo, asinakusilela ukukhankanya owayesakuba ngumdlali we-NBA uDennis Rodman.. Inxulunyaniswa nokudideka, iinwele eziluhlaza yenye yeendlela zakhe zokubheja ezikrelekrele ukuba siyazithelekisa nezinye azithathileyo, ngakumbi ezo zinxulumene nesambatho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Izinwele eziluhlaza
Ukutya okunotyebileyo kwePotassium